Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Entana Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Ejipta: Entana Shinoa
Voadika ny 12 Janoary 2008 15:26 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Ejipta, Shina, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika, Vonjy Voina
Efa fantatrao ny toekarenan’ny Repoblika Entim-bahoakan’ny Shina, iray amin’ny toekarena mivelatra indrindra eto ambonin’ny tany. Tsy atao mahagaga ny fahitana entana Shinoa eny an-tsena eto Ejipta noho ny fitomboan-karena Shinoa mihoatra ny 10 isanjato isantaona. Ny tena mahaliana dia ny fiankinan’ny fivarotana entan-tshinoa ivelan’ny trano fivarotany. Tsikaritry ny rehetra fa mitety trano mihitsy ny mpivarotra ( euh… vavy) Shinoa hivarotany ny vokatra avy any aminy.
Tayara Waraa  – Kite – no milaza ny niainany  tamin’ny iray ireny vehivavy Shinoa mpivarotra ireny.
Nanontany ahy tamin’ny teny arabo diso tsindrim-peo izy: “Hividy entana Shinoa ve o?”
Mpiteny azy ireny hoe: “tsia, misaotra” aho dia mandrindrim-baravarana… fa betsaka olona tao an-trano ka nampandroso azy aho.Napetrany tamin’ny gorodona ny kitapo nentiny ary dia navoakany ny entana tany aminy. Lamban-databatra, akanjo, kojakojam-panosorana tarehy.
Velom-panontaniana maro aho tany anatiko tany nijery azy.
Tsy noho ny zavatra amidiny amintsika izay efa fantatra fa manafika sy mameno tanàna tahaka ny hamaroan’isany ihany. Fa ny antony nanosika azy hanao izao asa mafy izao, miainga avy any an-tanindrazany any mibaby kitapo moa va tsy trafon-drameva. Mieritreritra ny nofiny sy ny tanjony ary ny tovolahiny mahafatifaty aho 🙂
Ary dia notohizany ny fitantarana …
Mampiaiky ahy itony olona itony na dia tsy ekeko aza ny fombany hahazoana vokatra isan-karazany amin’ny miainga amin’ny kalitao zero … tena ratsy anie ny entany nefa dia aondrany aty amintsika. Tsapako miatrika vondro-tafika voalahatra rehefa mahita ireny kelimaso afa-manao ny zava-drehetra ireny.
Hay ve rey'olona ka feno hatraiza hatraiza ireto kelimaso ireto e!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/01/12/453/
 Tayara Waraa: http://tayarawara2.blogspot.com/
 no milaza ny niainany: http://tayarawara2.blogspot.com/2007/12/blog-post.html